भारतले नेपाललाई हेपेपछि नेपाली शीर्ष नेताहरु चीन जान लागेका हुन् ? प्रचण्ड लगायत यि नेताहरु किन बारम्बार जान्छन् चीन ? आखिर के छ चीनमा ? « OSNepal.com :: Latest News,Breaking News, Latest, Politics, World, Entertainment, Sports, Technology, Interview, Nepal News
भारतले नेपाललाई हेपेपछि नेपाली शीर्ष नेताहरु चीन जान लागेका हुन् ? प्रचण्ड लगायत यि नेताहरु किन बारम्बार जान्छन् चीन ? आखिर के छ चीनमा ?
काठमाडौं, मंसिर १७-नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मंसिर अन्तिम साता चीन भ्रमणमा जाने आफ्नो पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम तत्कालका लागि स्थगन गरेका छन्।प्रधानमन्त्री एवं पार्टीका अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग आइतबार यही विषयमा छलफल गरेपछि सोमबार दाहालले पूर्वनिर्धारित कार्यताकिा संशोधन गरेका हुन्।